Resa-behivavy: Mihena ve ny fitiavana rehefa misy zaza? | Hevitra MPANOHARIANA
ny tena mahasamihafa ny lelah sy vevavy matetika dia ny vevavy be teoria loatra (rehefa somary intelligente izy) na tena tsy mieritreritra mintsy (miankina @ fianarana nataony)... ny lelahy ndray realiste sy concret :)
=> tsy azo idirana ity resa-behivavy ity fa ny valiny dia hoe ekena mba tsy hifandirana eee :lol:
Nampidirin'i simp @ 23:03, 2008-07-29 [Valio]
- Rehefa misy zaza, dia inevitable ilay fihenan'ny fitositosian'ny samy mpivady.
Ny miezaka handrindra an' izany sisa no azo atao avy eo, mba tsy hanimba zavatra.
- Raha tsy misy zaza koa anefa, dia tsy hitsahatra ny hitady mihitsy ramatoa sy ny rafozana.
Noho izany, inevitable koa io "tsy maintsy manao zaza" io, raha tsy izany dia mety manimba zavatra.
Nampidirin'i Rashid @ 03:14, 2008-07-30 [Valio]
tsy haiko ity raha ho tafavoaka na tsia fa alefako ihany
1/Tsy mampihena ny fitiavan'ny mpivady ny fisian'ny zaza fa mampitombo ary, fa saingy mihena ny fitosiana satria miampy olona mitositosy ianao ao an-trano. Izay no iainako.
2/Valin’ny paragrafy faharoa < itako indray andro tamin’ny tv ny fampitahana ny fiasan’ny cerveaux an’i vhv sy ny lhl. Tadidiko tsara ka izao no résumé : ny an’ny vhv dia miasa 2x noho ny an’ny lhl. Izany hoe miasa be ny an’ny vhv ka io no ahafahany sady mandamina ny any an-tokatrano no manao ny asany ara-dalàna. Ny an’ny lhl kosa izay azo atao fa mi-tourner à moitié (mihoatra aminay vhv) dia izay no antony araka ny voalazanao amin’ny paragrafy faharoa io “Ny vehivavy afaka … dia tavela kokoa ny zavatra faharoa”. Io no ahafahanay vhv mbola mikarakara tokatrano sy mitaiza ny zanaka na dia reraka avy miasa iny ary, fa ianareo lhl rehefa reraka dia “c’est la fin du monde” (hi hi hi !) tsy mahavita mieritreritra izay tokony hatao firy. Ny mampihomehy ary dia rehefa matory hono dia ny lhl tonga dia rendrika haingana fa izahay vhv dia eo vao miasa ny moitié-n’ny cerveau, on veille sur tout (mandeha mijery ny zaza sao tsy mirakotra @ hatsiaka, sns), eo vao miasa à moitié ny cerveau-nay izany hoe mitovy fiasa amin’ny lhl miasa ny cerveau an’ny vhv rehefa matory. Tsy mamorona aho an !
Nampidirin'i kdaombaramita @ 14:11, 2008-07-30 [Valio]
Mahita zavatra tahaka izany ahfantaran'ny andaniny nyankilany dia tena mahafinaritra ahy mihitsy.
Nampidirin'i jentilisa @ 19:26, 2008-07-30 [Valio]
Ampiako kely : ny mahatonga ny lhl rendrika aingana rehefa matory dia satria tena tsy miasa ilay cerveau, fa ny an'ny vhv no io miasa atsasany io.
Nampidirin'i Kdaombaramita @ 20:56, 2008-07-30 [Valio]
Izany no atao hoe tsy miasa saina ny lehilahy izany rehefa matory? Ka tsy kaazany fahasambarana na dia toy nytsy fahatsaantena ho an'ny lehilahy ve izany ary misy fijaliana kelyho an'ny vehivavy sa natiora dia tsy mampaninona intsony?
Nampidirin'i jentilisa @ 02:06, 2008-07-31 [Valio]
Tsy hoe tsy miasa saina ihany fa ity no mety itenenana azy : "MATY ERITRERITRA !"
Nampidirin'i Raketaka @ 18:48, 2008-07-31 [Valio]
efa manomboka misy mamely indray izy izany// raha atao hoe maty eritreritra indray manko dia tsy mieritreritra hafa tsy ny azy izy//moa tena izany tokoa ve? diso kosa angamba hoy aho
Nampidirin'i jentilisa @ 17:50, 2008-08-01 [Valio]